Prandelli: Italy Uma Ciyaari Doonaan Inay Barbareeyaan
HomeWararka MaantaPrandelli: Italy Uma Ciyaari Doonaan Inay Barbareeyaan
23/06/2014 Abdiwahab Ahmed
Tababaraha xulka Italy, Prandelli ayaa sheegay in xulkiisu uu guul doonayo kulanka Salaasada ee ay isku haleeli doonaan Uruguay, si ay u xaqiijiyaan inay u gudbaan wareegga 16-ka ee group D.
Xulka Talyaaniga ayaa tigidhka u goosan doona wareegga labaad, haddii ay ka badbaadaan guul darro kulanka habeen dambe, laakiin tababaraha xulka Talyaaniga ayaa sheegay in hamigiisu yahay in wadankiisu saddexda dhibcoodba qaato kulankaas.
“waxaan u sheegay kooxdayda inay naftooda aaminaan ayna soo bixi doonaan. Waxa naga go’an in aanu badino, si aanu u helno natiijo fiicanna waa in aanu kulanka tagno iyadoo aanu guul filayno” ayuu yidhi Prandelli.
“Ma nihin wadan u taga garoomada inay barbar dhac galaan, mana doonayno in aanu aragno kooxda oo lagu dhibaataynayo garoonka, waa in aanu muujinno geesinnimo oo aanu u halganno natiijada wanaagsan. Waxa na sugaysa shaqo adag sababtoo ah waa shul ama shal” ayuu raaciyey.
Talyaanigu waxay leeyihiin 3 dhibcood, iyagoo 2-1 ku khaarajiyey Ingiriiska, laakiin kulankii labaad ayaa 1-0 lagu dubtay, iyadoo ay u maarewaayeen oo dhinac walba ay kaga yimaadeen ciyaartooyada laga yaaban yahay ee Costa Rica.
Xulka Costa Rica ayaa hoggaaminaya group-kan, waxaanu leeyahay 6 dhibcood, waanu baxay, halka Ingiriisku uu tartanka sidaa kaga hadhay, waxase la sugayaa Italy iyo Uruguay ka diyaaradda raaci doona.